Jen. Cali Gaab oo mar kale saaka ka badbaday isku day lagu damacsanaa in lagu khaarajiyo. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Jen. Cali Gaab oo mar kale saaka ka badbaday isku day lagu damacsanaa in lagu khaarajiyo.
Allhadaaftimo May 24, 2020 Uncategorized
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogganaa oo goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo jugtiisa si weyn loo maqlay.
Sida wararku sheegayaan, qaraxa oo ahaa Miino wadada dhineceeda lagu aasay ayaa qabsatay gaari uu watay Taliyaha hoggaanka Caafimaadka ciidamada Booliska Somaliya Jeneraal Cali Xersi Barre Cali Gaab.
Cali Gaab ayaa xilga weerarka qabsanayay waxa uu marayay wadada dheer ee Vinta Una October, waxaana weerarka ku dhaawacmay oo kaliya Wiil dhalinyara ah oo Mooto Bajaaj watay.
Shabaab ayaa sare u qaaday baadi goobka ay ugu jiraan dilka Jen. Cali Gaab, iyadoo weerar kan lamid ah uu ka badbaaday oo loo dhigay inta u dhaxeysa Isgoyska Banaadir & dhismihii hore ee Wakaalada Biyaha.
Maalmahan dambe Muqdisho waxaa ku soo badanaya Qaraxyada Miinada ah ee lala eeganaayo gaadiidka ay wataan Ciidamada dowladda Federalka Somaliya ee wadooyinka Muqdisho maraayo, waxaana la yaab leh sida Shabaab ay ku helayaan xogta wadooyinka ay marayaan Saraakiisha dowladda ee qaraxyada loo dhigo.
Previous Karaash: Madaxweyne Deni hadda salaanta iskama qaadno
Next Somaliya Tacsiyeysay Geerida Safiirkii Jaamacadda Carabta Ee Soomaaliya